२०७५ चैत १८ गते सोमवारको प्रतीक दैनिक
तीव्र हुरीले राजमार्गमा दुर्घटना ः दुईजनाको मृत्यु दर्जनौं घाइते
प्रस, परवानीपुर, १७ चैत/ आइतवार साँझ असिना पानीसहित चलेको भुमरीले वीरगंज–सिमरा सडकखण्डको परवानीपुरमा दर्जनौं सवारीसाधन पल्टाउनुका साथै एकजनाको ज्यान लिएको छ । साँझ करिब ७ः३० बजेको समयमा परवानीपुर गाउँपालिका वडा नं. ४ मा पर्ने त्रिशक्ति सिमेन्ट अगाडि चैनपुर चोकमा तीव्रगतिको भुमरी चलेको थियो । पश्चिमबाट पूर्वतर्पm चलेको भुमरीले राजमार्ग पार गर्ने क्रममा सडकमा गुडी रहेका सवारीसाधनहरू पल्टाएको थियो । साना र हल्का सवारीहरूलाई उडाएर केही परसम्म पु¥याएको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन् । सो क्रममा वीमनपा–१८ भवानीपुर निवासी १८ वर्षीय सरोज राम र बारा फेटा गापा–१ भरवलिया निवासी २४ वर्षीया रुनी देवीको ज्यान गएको छ । सो घटनामा ४० जना भन्दा बढी घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये १६ जनाको अवस्था गम्भीर छ । घाइतेहरूको उपचार नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल वीरगंज, नेशनल मेडिकल कलेज र गण्डकस्थित वीरगंज हेल्थकेयर अस्पतालमा उपचार भई रहेको छ । करिब ५ सय मिटरको क्षेत्र ओग्टेर आएको हुरीले चैनपुर चोकदेखि चैनपुर गाउँसम्म एउटा बस, एउटा ट्रक, पाँचवटा मोटरसाइकल, फ्रिज बोकेको ६ वटा भारतीय ट्र
भारतमा हत्या, लाश फाल्ने नेपालमा
प्रस, परवानीपुर, १७ चैत/ वीरगंजको सीमावर्ती भारतीय शहर रक्सौलको प्रहरीले दादागिरी गरी भारतीय मूलको लाश नेपालमा फाल्दै गर्दा नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूले समातेका छन् । मध्याह्न साढे १२ बजे बेवारिसे लाश फाल्न पुगेको टोलीलाई मितेरी पुल नजीक सशस्त्र प्रहरीले समातेको सशस्त्र प्रहरी भन्सार गुल्मका डिएसपी तिलक खडकाले बताए । उनले नेपाल प्रहरीको समन्वयमा भारतीय पुलिससँग छलफल गरी लाश र गाडी फिर्ता पठाइएको बताए । वीरगंज भन्सार नजीकै इनर्वा प्रहरी चौकीका प्रहरी नायब निरीक्षक दिपेन्द्र सिंहका अनुसार भारतको लाश नेपालमा फाल्न नपाइने भएकोले एक घण्टा नियन्त्रणमा लिएर भारतीय पुलिसका अधिकारीहरूसँग कुराकानी गरी लाश र गाडी रक्सौलकै क्षेत्रमा दाहसंस्कार गर्न पठाइएको बताए । झुक्किएर चालक नेपाल छिरे रक्सौल प्रहरीले हिजो श्रीसिया खोला किनारमा गाडिएको अन्दाजी ४५ वर्षको पुरुषको कुहिएको लाश फेला पा¥यो । रक्सौलकै अस्पतालमा पोस्टमार्टम गरी आज मध्याह्न अन्त्यष्टि गर्न बिआर ३० जि ०९४७ नम्बरको एउटा भ्यानमा चालकसहित आगो दिन डुम जातिका युवक गरी दुईजनालाई रक्सौल प्रहरीले पठायो । रक्सौल थानाका एक अधिकारीले भने–“हा
सुनीताको अन्तिम बिदाइ, अन्त्येष्टिमा समाजका उच्च व्यक्तित्वको सहभागिता
राधेश्याम पटेल, परवानीपुर, १७ चैत/ आप्mनै पतिको निर्घात कुटपिटबाट मृत्यु भएको अभियोगमा संलग्न जोकसैलाई प्रहरी प्रशासनले नछोड्ने र कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने प्रहरी प्रशासनले आश्वासन दिइरहँदा सुनीताको परिवारजनको आँखाबाट आँसु खस्ने क्रम रोकिरहेको थिएन । यो घटना निर्मलाकाण्डजस्तै नलम्बियोस्, फरार परिवरजनलाई समातेर हदैसम्म कारबाहीको माग गर्दै सुनीताका दाइ आनन्द यादवले भने–“प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार गम्भीर भएर महिला हिंसाविरुद्ध कडा कानून बनाओस् जसले छोरीबेटीको रक्षा होस् ।” वीरगंजकी महिला अधिकारकर्मी लक्ष्मी उप्रेतीले भनिन्–“घटना भएदेखि म निकै नजिक छु, सुनीताको हातखुट्टा बाँधेर पेट, छाती, पिठ्यूँ र संवेदनशील अङ्गमा समेत आयरनले डामेर मारिएको छ ।” दुधौरा खोलामा आज सुनीताको दाह– संस्कार भयो । उनको अन्त्येष्टिमा पुगेकी महिला अधिकारकर्मी सावित्री सुवेदीले निर्मला हत्या प्रकरण सेलाउन नपाउँदै यस्तो पीडादायी घटनाले सम्पूर्ण नेपाली महिलालाई दुःखित तुल्याएको प्रतिक्रिया दिइन् । उनले महिलालाई बलात्कार गर्ने र ज्यान लिनेलाई फाँसीको व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखिन् । उनले भनिन्–“म पहिलेदेख
कलैयामा बृहत् सडकको लागि डिपिआर निर्माण शुरू
प्रस, कलैया, १६ चैत/ कलैया उपमहानगरपालिकामा सडक निर्माणको डिपिआर तयार गर्ने काम शुरू भएको छ । नगर प्रमुख राजेशराय यादवको सक्रियतामा खटेको प्राविधिक टोलीले नगर क्षेत्रमा निर्माण हुने विभिन्न सडकको स्थलगत निरिक्षण तथा नाप–नक्सा शुरू गरेको छ । कलैया–जैतापुर, मझौलिया–श्रीपुर, शीतलपुर मठ–बसतपुर, धर्मनगर–पूmलवरिया, शीतलपुर मठ–बलिरामपुर– पिप्राढी हुँदै भौरा बघवनसम्म सडक निर्माण गर्ने योजना रहेको नगर प्रमुख यादवले बतााए। एशियन इन्फ्रास्टक्चर इनभेस्टमेन्ट बैकको लगानीमा निर्माण गर्न लागिएको प्रस्तावित सडकहरूको दक्षिण कोरियाली कम्पनी युसिन–सुशिन–समन जेभीले डिपिआर तयार गर्ने जिम्मा पाएको छ । कम्पनीका प्राविधिकहरू सुरेश बराल र विवेक बरालले निरीक्षण शुरू गरिसकेको नगरप्रमुख यादवले प्रतीकलाई बताए । कलैया उपमहानगरपालिकाको उत्तर देखि दक्षिणसम्मको सबै वडालाई कालोपत्रे सडकले जोड्ने लक्ष्य पूरा गर्न पहिलो चरणमा सडक निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको यादवले बताए । प्राविधिक टोलीलाई स्थलगत निरीक्षण गराउने क्रममा उपमहानगरपालिका–२० का वडाध्यक्ष इमामुद्दिन मियाँ ठकुराई, १३ नं. का राजनरा
हावाहुरीले ठोरीमा ४ घरको छाना उडायो
प्रस, ठोरी, १७ चैत/ साँझ पख असिना पानीसहित आएको ठूलो हावाहुरीले ठोरीमा चरजनाको घरको छाना उडाएको छ । ठोरी गाउँपालिका–१ का प्रकाश कुँवर, सन्तु कुँवर र देबु कुँवरको घरको जस्ताको छाना उडाएको वडा सदस्य रविन तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । साँझपख आएको ठूलो हावाहुरीले डाँडा भाटासहित जस्ताको सबै छाना उडाएर लगेको उनले बताए । सोही स्थान बस्ने धनबहादुर कुँवरको भान्साघरको छाना समेत उडाएर लगेको उनले बताए । घरको सबै छाना उडाएर ५ सय मिटरभन्दा टाढा पु¥याउँदा असिना पानी घरभित्र पसेर अन्य सामग्रीसमेत क्षति पुगेको उनले बताए ।
निजी जग्गाबाट बाटो निकालेको आरोप
प्रस, परवानीपुर, १७ चैत/ बारा, विश्रामपुर गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले जनताको निजी जग्गाबाट जबरजस्ती बाटो निकालेको आरोप छ । सो गाउँपालिका वडा नं १ का बासिन्दा केश्वरप्रसाद यादवले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । उनका अनुसार हचुवाको भरमा निजी जग्गामा सडक निकाल्ने काम भएको र आपूmले रोक्न खोज्दा नमानेपछि अदालत गएको बताए । अदालतले काम रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्दा पनि पनि आदेशको अवहेलना गर्दै धमाधम माटो पुरेर सडक बनाउने काम भइरहेको जग्गाधनी केश्वर यादवले गुनासो गरे । गाउँपालिका अध्यक्ष अमिरी पाल र वडा नं १ का वडा अध्यक्ष ह्हृदयनारायण यादवको अगुवाइमा गलत काम भइरहेको उनको आरोप छ । उनले साबिक छतवा गाविसको वडा नं ४ को कित्ता नं २६९ को ४ कठ्ठा ६ धुर जग्गाबाट करीब ७ धुर कब्जा हुने गरी बाटो बनाउन लागिएकोले उच्च अदालत अस्थायी इजलास वीरगंजमा मुद्दा हाल्न बाध्य भएको बताए। यस सम्बन्धमा गाउँपालिका अध्यक्ष अमिरी पालसँग बुझ्दा गाउँपालिकाले साबिकको सार्वजनिक सडकमैं नयाँ सडक निर्माण गरिरहेको दाबी गरे । उनले पहिलेको नक्सा अनुसार नाप–नक्सा गरी सडकको काम अघि बढेको बताए । गाउँपालिकामा काम
वीरगंज महानगरका कर्मचारी पुनः अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा
प्रस, वीरगंज, १७ चैत/ वीरगंज महानगरपालिकाका कर्मचारीहरू आजदेखि पुनः आन्दोलनमा उत्रेका छन् । नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएशन र स्थानीय तह कर्मचारी सङ्घको आह्वानमा पुस ३० गतेको निर्णय कार्यान्वयनको माग गर्दै आजदेखि अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । स्थानीय तह कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष मुकेश गुप्ताले पुस २ गतेदेखि ३० गतेसम्म भएको आन्दोलनको क्रममा वीरगंज महानगरपालिका बोर्डले कर्मचारीहरूको माग सम्बोधन गरेपनि हालसम्म कार्यान्वयन नगरिएको कारण आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प नरहेको बताए । उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश बस्नेतलाई निर्णय कार्यान्वयनको लागि चैत १४ गते ३ दिने अल्टिमेटमसहित ध्यानाकर्षण गराएको भएपनि सुनवाइ नभएको कारण आजदेखि आन्दोलन गरिएको बताए । उनले वारुणयन्त्र, दैनिक एक समय सरसफाइ, लामखुट्टेविरुद्ध अभियान, शिक्ष्Fा, स्वास्थ्यबाहेक सम्पूर्ण सेवा ठप्प गरिएको जानकारी गराएका छन् । महानगरका कर्मचारीहरूले कर्मचारी समायोजन हुँदा निजामती कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा उपलब्ध हुनुपर्ने माग गरेका थिए । सो सम्बन्धमा वीरगंज महानगरपालिका बोर्डले पुस ३० गते निर्णय गरेको थियो
शिक्षा र चरित्र
अनन्तकुमार लाल दास शिक्षा भनेको अध्ययन र ज्ञान प्राप्ति हो । शिक्षाले मानिसको रुचि, योग्यता, सामाजिक मूल्य र मान्यतालाई ध्यानमा राखी आवश्यकता अनुरूप स्वतन्त्रता प्रदान गरी उसको सर्वाङ्गीण विकास गर्दछ । शिक्षाले हाम्रो सोच्ने, समाजमा घुलमिल गर्ने र जीवन यापन गर्ने तरीकालाई परिमार्जित गर्दछ । विवेकशीलता शिक्षाको देन हो । नेपालको प्राचीन शिक्षाले हामीलाई प्रकृति र सबैको सम्पर्कमा बस्न सहयोग गर्दथ्यो । त्यसले हाम्रो परिवेश, परिस्थिति र नेपाली संस्कारलाई राम्ररी बुझ्न सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्दथ्यो तर नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणाली जीविका चलाउने साधनमात्र बनेकोे छ । वर्तमान शिक्षामा संस्कारको नितान्त अभाव छ । आजको शिक्षा प्रणाली व्यावहारिक ज्ञानबाट दिन प्रतिदिन टाढिंदै गएको छ । वर्तमान शिक्षा प्रणालीले मानिसलाई एकातिर स्वावलम्बी बनाएको छ भनें अर्कोतर्पm यो शोषणको नीतिमाथि आधारित छ । विकास र प्रगतिको नाउँमा यो प्रकृतिलगायत त्यस्ता हरेक कुराको शोषण गर्दछ जसको विनाशबाट मानिसलाई केही हासिल हुँदैन । मानवीय संवेदनासँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन किनभने यस्तो शिक्षायुक्त व्यक्ति आज उच्च महŒव
दोषी उम्कन नपाओस्
अरूको ज्यान बचाउने शिक्षा लिएको र कसम खाएको चिकित्सकको यातनाबाट आप्mनै पत्नीको ज्यान गएको कुरा अपत्यारिलो छ । नारायणी अस्पतालमा कार्यरत डा. सच्चिदानन्द यादवको कुटपिट तथा चरम यातनाबाट उनकी जेठी पत्नी सुनीताको ज्यान गएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । परमेश्वर मानिएको पतिको हातबाट ज्यान गुमाउनुपर्छ भन्ने कल्पना सुनीताले गरेकी थिइनन् होला । पछिल्लोपटक चैत्र ११ गते कुटपिट तथा चरम यातना भोगेकी सुनीताको उपचारको क्रममा मृत्यु भयो । पतिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । घटनामा सुनीताका पतिका अलावा सासू, ससुरा र देवरको समेत संलग्नता रहेको कुरा उनीहरूविरुद्ध दायर कर्तव्य ज्यान मुद्दामा किटान गरी उल्लेख गरिएको छ । घटना प्रकृतिले सुनीतामाथि अमानवीय यातना भएको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा सार्वजिक भएका तस्वीरहरू र उद्धारकर्ताहरूका अनुसार सुनीताको शरीर घाउ–चोट तथा नीलडामले भरिएको थियो । लाठी, फाटाको स्पष्ट डाम र तातो वस्तुले डामेको चिनो शरीरभरि थियो । कुनै बन्द कोठामा बन्धक बनाएर वा एकभन्दा बढीको संलग्नताविना त्यति बिघ्न यातना सम्भव छैन । किनभने एक व्यक्तिले कसैलाई यति यातना दिन सहज छैन । सुनीता डिप्
२०७५ चैत १७ गते आइतवारको प्रतीक दैनिक
पत्नीको ज्यान लिने चिकित्सकलाई कडा कारबाईको माग, अधिकारकर्मीहरूद्वारा वीरगंजमा प्रदर्शन
प्रस, वीरगंज, १६ चैत/ चिकित्सक पति डा. सच्चिदानन्द यादवको कुटपिट तथा यातनाबाट पत्नी सुनीतादेवी यादवको शुक्रवार उपचारको क्रममा मृत्यु भएपछि मृतक सुनीतालाई न्याय दिनुपर्ने र हत्यामा संलग्न दोषीहरूमाथि कडा कारबाई हुनुपर्ने माग गर्दै अधिकारकर्मीहरूले वीरगंजमा प्रदर्शन गरेका छन् । सामाजिक अभियन्ता, नागरिक अगुवा र महिला अधिकारकर्मीहरूले शनिवार संयुक्त जुलुस प्रदर्शन गर्दै ‘सुनीतालाई न्याय दिलाऔं’ं नारा लगाएका थिए । वीरगंजको घण्टाघरबाट बिहान ८ बजे शुरू भएको जुलुस बजार परिक्रमा गरी पुनः घण्टाघरमा आएर कोणसभामा परिणत भएको थियो । सभामा ठाकुर राम बहुमुखी क्याम्पसकी प्राध्यापक डा. सुषमा द्विवेदी तिवारीले मधेसी समाजको विकृतिको कारण यस्तो घटना भएको भन्दै दुःख व्यक्त गरिन् । घटनाको जड बालविवाह र दाइजो रहेको उनको विश्लेषण थियो । सुनीतालाई उनको पतिलगायत ससुराली पक्षले चरम यातना दिएर जबरजस्ती पागल घोषणा गर्ने दुष्प्रयास गर्दा समाज तथा कानूनले चासो नदेखाएपछि अपराधीहरूले ज्यान लिने दुष्साहस गरेको डा. तिवारीको भनाई थियो । अर्की प्राध्यापक मोनिका सिंहले सुनीतादेवी यादवको घटनाप्रति आक्र
एसइई स्थगनपछि विद्यार्थीको आक्रोश, जीतपुर दिनभर तनावग्रस्त
दिवाकर भण्डारी/राधेश्याम पटेल, १६ चैत/ प्रदेश नं २ मा स्थगित भएको एसइर्ई परीक्षाको विषयलाई लिएर बाराको जीतपुर शनिवार दिनभर तनावग्रस्त बन्न पुगेको छ । परीक्षा स्थगित भएको विरोधमा आक्रोश पोख्न सडकमा उत्रिएका विद्यार्थी र प्रहरीबीचको झडपले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको जीतपुर बजार करीब ६ घण्टा तनावग्रस्त बनेको हो । प्रश्नपत्र बाहिरिनु र परीक्षा स्थगित हुनुमा सरकार दोषी रहेको भन्दै विद्यार्थीले जीतपुरस्थित सडकमा बिहानैदेखि यातायात अवरुद्ध पार्दै प्रदर्शन थालेका थिए । सडकमा उत्रिएका विद्यार्थीलाई हटाउन प्रहरीले बल प्रयोग गरेपछि स्थिति तनावपूर्ण बनेको थियो । प्रहरीले यातायात खुलाउने क्रममा बल प्रयोग गरेको भन्दै आक्रोशित विद्यार्थीले प्रहरीमाथि ढुङ्गा प्रहार गरेपछि दोहोरो झडप भएको थियो । विद्यार्थी र प्रहरीबीचको झडप नियन्त्रणमा आउन करीब ६ लागेको थियो । झडपका क्रममा विद्यार्थी र प्रहरी दुवैतर्पm दर्जनौंभन्दा बढी घाइते भएका छन् । जीतपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सञ्जय साहका अनुसार विद्यार्थीहरूले राजमार्ग अवरुद्ध गरिरहेको बेला राजमार्ग खुलाउन आएका सुरक्षाकर्मीहरूले प्
निजी शैक्षिक संस्था तोडफोडप्रति छाता सङ्गठनहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण
प्रस, वीरगंज,१६ चैत/ निजी विद्यालयको छाता सङ्गठन प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन र हिसान पर्साले निजी विद्यालय तथा क्याम्पसहरूमा भएको आक्रमण गम्भीर प्रकृतिको रहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । एसइई परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिरिएपछि स्थगित परीक्षाको विरोध गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका विद्यार्थीहरूले वीरगंजस्थित निजी विद्यालय तथा कलेजहरूमा गरेको तोडफोड नियोजित र षड्यन्त्रपूर्ण रहेको आरोप लगाएको छ । शनिवार वीरगंजस्थित अनुभूति कलेजमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा छाता सङ्गठनका अगुवाहरूले सो आरोप लगाएका हुन् । शुक्रवार आक्रोशित विद्यार्थीहरूलाई केही राजनीतिक दलका विद्यार्थीहरूले व्यक्तिगत इबी साध्न गलत तरीकाले परिचालन गरी तोडफोड गर्न लगाएको वक्ताहरूको दाबी थियो । पत्रकार सम्मेलनमा नेशनल प्याब्सन पर्साका अध्यक्ष रामसुन्दर चौधरीले अनुभूति कलेज, नेशनल इन्फोटेक कलेजलगायत निजी विद्यालयमा तोडफोड गरी लाखौं मूल्यबराबरको क्षति पु¥याएको बताए । उनले आन्दोलनरत विद्यार्थीलाई उचालेर इबी साध्न गरिएको आक्रमणप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । आक्रमण भइरहँदा प्रहरीलाई जानकारी गराए पनि समयमा प्रहरी नआइ
वार्षिकोत्सवमा महासङ्घ पर्साको प्रभातफेरी
प्रस, वीरगंज, १६ चैत/ नेपाल पत्रकार महासङ्घ पर्सा शाखाले ६४औं स्थापना दिवसको अवसरमा प्रभातफेरी गरेको छ । घण्टाघरबाट निकालिएको प्रभातफेरी आदर्शनगर हुँदै नगरपरिक्रमा गरेको थियो । नगरपरिक्रमापछि घण्टाघरमैं कोणसभा गरेर प्रभातफेरी समापन भएको थियो । कोणसभामा प्रदेश अध्यक्ष्F दीपेन्द्र चौहान, शाखा अध्यक्ष्F श्याम बन्जाराले पत्रकार हकहितको लागि महासङ्घ सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनीहरूले पत्रकारितामा चुनौती र अवसर दुवै रहेको बताए । कार्यक्रमको सहजीकरण सचिव युवराज खड्काले गरेका थिए ।
भोजपुरीमूलका विदेशी गायक राजमोहनले झुमाए
प्रस, परवानीपुर, १६ चैत/ भोजपुरीमूलका विदेशी गायक राजमोहनले वीरगंजमा आप्mना प्रस्तुतिमार्पmत् वीरगंजेली दर्शकलाई शनिवार झुमाएका छन् । त्रिजुद्ध मावि परिसरमा शनिवार साँझ ५ बजेदेखि शुभारम्भ भएको अन्तर्राष्ट्रिय भोजपुरी साङ्गीतिक कार्यक्रममा उनले भोजपुरी पप गीत गाएर दर्शकको मन जितेका हुन् । नेपाल भोजपुरी समाज वीरगंजले भोजपुरी भाषाको विकास तथा प्रवद्र्धनका निम्ति आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले तोहर शहर, सात समुन्दर पार लेजाइके, माई मत रोइए जस्ता पश्चिमेली धुनमा कर्णप्रिय गीत गाएर दर्शकलाई झुमाए । कार्यक्रममा उनले डेढ सय वर्ष पहिले ब्रिटिश सरकारले भारतको उत्तरप्रदेश र बिहारबाट ७० परिवारलाई खेती गर्नको लागि जहाजबाट नेदरल्यान्डको उपनिवेश रहेको सुरिनाम टापूमा लगेको र अहिले त्यही टापूले छुट्टै देशको रूपमा पहिचान हासिल गरेको बताए । चालीस वर्षीय उनले सन् १९८६ मा पहिलोपटक भारत आउँदा आप्mनो समाजको सुगन्ध महसूस गरेको र आप्mनो रीतिरिवाज र संस्कारलाई नजीकबाट नियालेको चर्चा गरे । २० वर्ष पहिले भोजपुरी गीत, कविता, गजल, सङ्गीत सुरिनाममा थिएन तर आज आपूmले २० वर्षयता थुप्रै भोजपुरी गीत, सङ्गीत उत्
५औं निजगढ गोल्डकप फूटबल प्रतियोगिता हुने
प्रस, निजगढ, १६ चैत/ निजगढ युवा क्लबले शनिवार पत्रकार सम्मेलन गरेर पाँचौं निजगढ गोल्डकप पूmटबल प्रतियोगिता आगामी चैत २३ गतेदेखि सञ्चालन हुने जानकारी गराएको छ । प्रतियोगिता चैत २३ गतेदेखि निजगढ नपा–४ स्थित कछडिया टोलको खेलमैदानमा हुने पत्रकार सम्मेलनमा प्रतियोगिताका सहसंयोजक जयराम कुमरले बताए । पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही र चितवन गरी पाँच जिल्लाका ८ वटा टिम सहभागी हुने जानकारी गराइएको थियो । प्रतियोगितामा विजेतालाई रु १ लाख ५० हजार र उपविजेतालाई रु १ लाख नगदले पुरस्कृत गरिने बताइएको थियो । पत्रकार सम्मेलन क्लबका अध्यक्ष्F परदेशी कुमरको अध्यक्ष्Fतामा भएको थियो ।
विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलााची किन ?
ओमप्रकाश खनाल परीक्षा केन्द्रमा भेटिनुपर्ने कक्षा १० का कलिला विद्यार्थीहरू सडक तताइराखेका छन् । परीक्षाअगावै माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को ३ विषयको प्रश्न लगातार बाहिरिएपछि सरकारले प्रदेश २ मा परीक्षा स्थगित गरेको छ । परीक्षार्थीको पीडा स्वाभाविकरूपमा सडकमा पोखिएको छ । विद्यार्थीको प्रदर्शनलाई कतिले आक्रोश भने पनि वास्तवमा यो पीडाको प्रस्फुटन हो । परीक्षाको तयारीमा रहेका विद्यार्थी न्याय माग्दै सडकमा नारा, जुलुस र प्रहरीसँग मुठभेड गर्ने रहर हुँदैन । स्थगित परीक्षा केही दिनमा लिइएला, सरकारले चैतभित्रै परीक्षा हुने बताएको छ । तर राज्यको निकम्मापन र खेलाँचीले परीक्षाको तयारीमा रहेका प्रदेश २ का ७० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीलाई जुन अन्योल र मानसिक तनाव दिएको छ, त्यसको परिपूरण भने सम्भव हुँदैन । विद्यार्थीहरू परीक्षाको तयारीमा दत्तचित्त हुनुको साटो सडकमा टायर बाल्ने र रेलिङ भत्काउनेजस्ता अराजक दृश्यमा देखिए । शिक्षा दिने प्रतिष्ठान र तिनका संरचनाहरू विद्यार्थीको निशानामा परे । तोडफोड र भौतिक संरचनामा क्षति पु¥याउने काम उचित हुनै सक्दैन । कतिले विद्यार्थीको यस्तो कार्यलाई कस्तो श
कला एक सशक्त माध्यम
कलाले व्यक्तिको भावनालाई स्पर्श गर्छ, उसको संवेदनालाई जाग्रत गर्छ । आज प्रकृतिप्रति असंवेदनशीलताको यो परिणाम हो कि प्रकृति नै प्रदूषणको शिकार भएको छ । प्रकृतिको चारैतिर प्रदूषणका विभिन्न रूप पैmलिएका छन् भने के कलाको माध्यमबाट यस प्रदूषणलाई पैmलिनबाट रोक्न सार्थक प्रयास सम्भव छ त ? के कलाको माध्यमबाट मानिसलाई प्रकृतिमा निरन्तर पैmलिने प्रदूषणप्रति जागरूक गर्न सकिन्छ ? के कलाको माध्यमबाट प्रकृतिलाई सुन्दर बनाउन सकिन्छ ? निश्चितरूपले यसको उत्तर हो– ‘हो’ । कलाका कैयौं आयाम छन् । अनेकपटक लेखक, कलाकारले पर्यावरणलाई लिएर आप्mनो मुखर अभिव्यक्ति दिएका छन्, अभियान शुरू गरेका छन् तथा पृथ्वीलाई सुन्दर, राम्रो र हराभरा बनाइराख्ने प्रयास पनि गरेका छन् । यस क्रममा नयाँ–नयाँ थिएटर बन्यो, पार्क बन्यो, भवन, सडक बन्यो– यी सबको निर्माणको समयमा यो दृष्टि रहन्छ कि यसको कलात्मक निर्माणको साथसाथ धर्तीको पारिस्थितिकी सुरक्षित बनाइराख्ने। नदीहरूको पवित्रताको अर्थ केवल वातावरण शुद्धिसँग मात्र होइन, अपितु फोहरबाट रहित भएर कलाका विविध आयाम खोज्नु हो । जललाई बचाउनु धर्तीलाई बचाउनु नै हो । राम्रो जलको ए
२०७५ चैत १६ गते शनिवारको प्रतीक दैनिक
परीक्षा रद्द भएपछि विद्यार्थीद्वारा प्रदर्शन, तोडफोड–आगजनी
प्रस, वीरगंज, १५ चैत/ एसइई परीक्ष्Fा अन्तर्गत शुक्रवार सामाजिक विषयको प्रश्नपत्र एक दिनअगावै सार्वजनिक भएपछि परीक्षा स्थगित गरेको विषयलाई लिएर आज वीरगंजमा विद्यार्थीहरूले रडाको मचाए । सार्वजनिक सञ्जालमार्पmत् सामाजिक विषयको प्रश्नपत्र पनि बाहिरिएको विषयलाई लिएर प्रदेश सरकार, शिक्ष्Fा निर्देशनालयले परीक्ष्Fा रद्द गरेपछि वीरगंजमा विद्यार्थीहरूले भीषण विरोध गरेका हुन् । विभिन्न परीक्ष्Fा केन्द्रबाट घण्टाघरमा एकीकृत विद्यार्थीहरूले परीक्ष्Fा रद्द गरेको विषयमा आक्रोश व्यक्त गरे । उनीहरूले घण्टाघरवरिपरि रहेका भौतिक संरचना तोडफोड गरेका थिए । समर्पण संस्थाको दुई तला भवनमाथि र विपीपार्कको टेम्पो स्टैन्डमा रहेको ट्राफिक सचेतनाको लागि राखिएको लाखौं मूल्यका टिभी तोडफोड गरिएको छ । त्यसैगरी, घण्टाघर चोकमा रहेको ट्राफिक आइल्यान्ड पनि तोडफोड गरिएको छ । विद्यार्थीहरूले घण्टाघरको सौन्दर्यताको लागि राखिएका बत्तीहरू पनि तोडफोड गरे र डिभाइडरमा आगो लगाएका थिए । छात्रहरू मात्र सहभागी रहेको विरोध प्रदर्शनको क्रममा स्व. रामजनम तिवारी बाबाको सालिक परिसरमा झुन्ड्याइएको मुख्यमन्त्रीको ‘बेटी पढाऊ, बे
उपचारको क्रममा सुनीताको मृत्यु
प्रस, परवानीपुर, १५ चैत/ पतिको कुटाईबाट गम्भीर घाइते सुनीता देवीको उपचारको क्रममा शुक्रवार काठमाडौंमा मृत्यु भएको छ । नारायणी अस्पतालका चिकित्सक डा. सच्चिदानन्द यादवकी जेठी पत्नी सुनीता देवीलाई चैत ११ गते डा. यादवले आप्mनै घरमा मरणाशन्न हुने गरी कुटेपछि गम्भीर घाइते सुनीताको वीरगंजमा उपचार सम्भव नभएपछि काठमाडौंको त्रिविवि शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको थियो । उपचारको क्रममा सुनीताको मृत्यु भएको उनको भाइ सन्तोष यादवले जानकारी गराए । डा. यादवसँग बाल्यकालमा नै विवाह भएको सुनीतामाथि डा. यादवले कान्छी पत्नी भिœयाएपछि मानसिक यातना दिंदै लामो सयमदेखि कुटपिट गरी अवसादमा राख्दै आएको सन्तोषले बताए । बितेको सोमवार डा. यादव र उनकी कान्छी पत्नीसमेत मिलेर कुटपिट गरी सुनीतालाई गम्भीर घाइते बनाएपछि सुनीताको माइती पक्षको जाहेरीको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले डा. यादवलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । प्रहरीले त्यति बेला डा. यादवविरुद्ध कर्तव्य ज्यानको मुद्दा चलाएको थियो । हाल घाइतेको ज्यान गइसकेको अवस्थामा उनीविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता हुने प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रावि तहको परीक्षामा चरम लापर्बाही
प्रस, पोखरिया, १५ चैत/ पर्सा जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित प्रावि तहको परीक्ष्Fा नाममात्रको रूपमा सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ । प्रावि तहको परीक्ष्Fामा शिक्ष्Fकहरूले कुनै वास्ता गरेका छैनन् । एउटै कक्ष्Fामा कक्षा १ देखि ५ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई राखेर परीक्ष्Fा भइरहेको छ । शिक्ष्Fा नियमावली अनुसार एउटा बेन्चमा बढीमा तीनजना फरक कक्ष्Fाका विद्यार्थीहरू सहभागी गराएर परीक्ष्Fा लिनुपर्ने प्रFवधान भएपनि एउटै बेन्चमा एउटै कक्ष्Fाका पाँचजना विद्यार्थीलाई राखेर परीक्ष्Fा भइरहेको छ । शिक्ष्Fा कार्यालय स्थानीय तहमा गाभिएपछि भइरहेको परीक्ष्Fा झनै भद्रगोल देखिएको हो । एकजना शिक्ष्Fकले विद्यार्थीहरूलाई अनुत्तीर्ण गर्ने प्रावधान नरहेको कारण पनि प्रावि तहसम्मको परीक्ष्Fामा वास्ता नगरिएको बताए । अर्का एक शिक्ष्Fकले कक्ष्Fा १ देखि ५ सम्मको अध्ययन बालबालिकाहरूको लागि आधार बन्नुपर्नेमा सोविपरीत अध्यापन भइरहेकोले विद्यार्थीहरूको जग कमजोर भएर माथिल्लो कक्ष्Fामा उक्लिएपछि विद्यालय छाड्ने क्रम बढेको बताए । पढाईको आधार तयार गर्न नसकेका विद्यार्थीहरूले शैक्षिक सत्रको बीचमैं विद्यालय छाड्न
तरकारीखेती नष्ट गर्दै निजगढका किसान बिडारी
प्रस, निजगढ, १५ चैत/ आपैंmले दिनरात मेहनत गरेर उत्पादन गरेको वस्तु नष्ट गर्न कसलाई मन लाग्छ र ? तर पटकपटक बजारमा बिक्री गर्न खोजे पनि लागत मूल्यसमेत नउठ्दा आजित भएर शुक्रवार निजगढ नगरपालिका–९ शान्तिटोलमा तरकारीखेती गर्दै आइरहेका चन्द्रप्रसाद बिडारीले ट्याक्टरले जोतेर बन्दाकोभी नष्ट गरेका छन् । विगत साढे तीन दशकदेखि तरकारीखेतीको निरन्तर अनुभव सँगाल्दै आएका बिडारी अहिले तरकारीखेती गर्ने वा नगर्ने द्विविधामा छन् । उमेरले ६ दशक नाघेका उनको मेहनत देखेर बस्तीका २० भन्दा बढी युवा तरकारीखेतीमा ८–१० वर्षदेखि निरन्तर लागेका छन् । “अरू पेशा के गरूँ उमेर पनि ढल्किसक्यो । त्यसै बसौं समय काट्न गा¥हो हुन्छ । अर्को वर्ष होला नि त,” उनले भने । १५ कट्ठामा लगाएको बन्दाकोभीमध्ये ३ कट्ठाको बन्दाकोभी बिक्री गर्न उनलाई निक्कै हम्मेहम्मे प¥यो । बाँकी १२ कट्ठाको बन्दाकोभी उनले ट्याक्टरले जोतेर नष्ट गरे । गत वर्षजस्तो बजार भाउ मात्र पाउन सकेको भए दुई/अढाई लाख रुपैयाँ बन्दाकोभीबाट आम्दानी हुन्थ्यो । उनले उत्पादन भएका तरकारी हेटौंडा लगेर बिक्री गर्दै आइरहेको थिए । तर अहिले बन्दाकोभी बिक्री न
रक्त सञ्चार केन्द्र स्थापना गर्न पहल
प्रस, कलैया, १५ चैत/ कलैया उपमहानगरपालिका, सामाजिक विकास समितिका संयोजक डा. अख्तर अन्सारीले कलैयामा रक्त सञ्चार केन्द्र स्थापनाका लागि पहल भइरहेको बताएका छन् । उनले प्रदेश सरकारसँग रक्त सञ्चार केन्द्र सञ्चालनको लागि प्रयास गरिएको र तत्काल रु २५ लाख बजेट विनियोजन पनि भएको बताए । जिल्ला अस्पताल कलैयामा भर्ना हुने बिरामीहरूमध्ये गर्भवती महिलालाई रगत आवश्यक हुँदा वीरगंज, हेटौंडाबाट रगत मगाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै उनले कलैयामा रक्त सञ्चार केन्द्र अतिआवश्यक भएको बताए । लामो दूरी तय गरी रगत लिन जानुपर्ने र आउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्थामा कुनै पनि घटना घट्न सक्ने हुनाले सचेत हुँदै कलैयामा रक्त सञ्चार केन्द्र सञ्चालन गर्ने पहल भइरहेको उनले बताए । डा. अन्सारीले प्रदेशको सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहसँग यसबारे छलफल भइरहेको जानकारी गराए । बजेट विनियोजन गरिएको कारण रक्त सञ्चार केन्द्र अविलम्ब सञ्चालनमा आउने उनले बताए । रगत भण्डारण गर्ने फ्रिज, केमिकल, दक्ष जनशक्ति र भवनको अभावमा अहिलेसम्म केन्द्र सञ्चालनमा आउन नसके पनि यसको पूर्वाधार विकासको लागि छलफल प्रयास अन्तिम चरणमा पुगेक
चौबीस घण्टा नबित्दै हस्पिटलको तालाबन्दी खुल्यो
प्रस, रौतहट, १५ चैत/ गरूडा नगरपालिकाको शिवनगरमा गैरकानूनीरूपमा सञ्चालित दुईवटा निजी हस्पिटल ओम हेल्थ केयर हस्पिटल प्रा.लि. र सञ्जीवनी हस्पिटलमा तालाबन्दी गरेको चौबीस घण्टा नबित्दै हस्पिटल सञ्चालनमा आएको छ । आर्थिक प्रलोभनमा परी तालाबन्दी खुलेपछि हस्पिटल सञ्चालनमा आएको स्रोतले जनाएको छ । बिहीवार गरूडा नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थी नेतृत्वको टोलीले ओम हेल्थ र सञ्जीवनीले हस्पिटल सञ्चालनको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयसँग अनुमति नलिएको पत्ता लागेपछि तालाबन्दी गरिएको थियो । पोली क्लिनिक सञ्चालन गर्न अनुमति रहे पनि हस्पिटल सञ्चालन गरेकोले गैरकानूनी भनी नगरपालिकाले तालाबन्दी गरेको थियो । गैरकानूनी सो हस्पिटलहरूमा शल्यक्रियासमेत हुने गरेको थियो । हस्पिटलमा दक्ष जनशक्ति नरहेको जनगुनासो बढेपछि अनुगमन गरिएको गरूडा नगरपालिकाले जनाएको छ । यस सम्बन्धमा सूचना अधिकारी भूपनारायण यादवसँग सम्पर्क गर्दा हिजो साँझ गरिएको तालाबन्दीपश्चात् सम्बन्धित पक्षसँग भएको छलफलमा एक महीनाभित्र कागजपत्र दर्ता गराउने गरी हस्पिटल खोल्न दिने सहमति भएको बताए । यसैगरी, आनन्द
जितेर पनि हारेकी ऊ
– उद्धव बडाल सञ्जु र मञ्जु दुवै मध्यम परिवारमा दुई/चार दिनको फरकमा जन्मेर हुर्कंदै गरेका साथीहरू हुन् । उनीहरूका पारिवारिक सदस्यहरू त्यति पढेलेखेका पनि होइनन् तर पनि समयको बदलिंदो बहावसँगै पढाउनुपर्छ भन्ने लहरले गर्दा करीब १ घण्टा हिंडेर पुगिने विद्यालयमा उनीहरू भर्ना गरिए । सञ्जुको स्वभाव शान्त, शालीन र सुमधुर थियो भने अञ्जुको ठीक उल्टो । पढाइलेखाइमा सञ्जु राम्ररी पढ्दै कक्षा ८ मा पुग्दा मञ्जु कक्षा ६ मैं थिई । समाजमा छोरी मान्छेले पढेको त्यति राम्रो नमानिने भएकोले सञ्जुको परिवारमा केही गुनासाहरू आउन थाले । साथै मञ्जुलाई पनि रिस उठेको थियो किनभने उसको पढाइमा त्यति लगाव थिएन । अलि मूर्ख र झगडा गर्ने खालकी थिई । कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षा सकिंदै गर्दा सञ्जुको परिवार बसाइँ स¥यो । सञ्जु नयाँ विद्यालयमा कक्षा ९ मा भर्ना भई । राम्ररी पढ्दै गई र छात्रवृत्ति पाएर उच्च शिक्षाका लागि शहर गई । ऊ राम्ररी पढ्दै गई । एउटी गाउँले मिहिनेती बुबाकी छोरी भएकीले बुबाआमाको पसिनालाई खेर जान नदिई निकै परिश्रमका साथ पढाई सकेर सरकारी जागीर पनि खाई । जागीरले गर्दा पारिवारिक जीवनयापनमा थप सहयोग पुग्न
उमाशङ्कर द्विवेदी केही बेरसम्म ती दुवै महारथीहरूबीच सामान्यरूपमा युद्ध भइरह्यो, तिनीहरूमध्ये कसैको पनि न्यूनाधिकता देखिएन । यतिकैमा महाराज शल्यले एउटा तीखो बाण हानेर धृष्टद्युम्नको धनुष काटिदिए तथा उसलाई बाणहरूबाट आच्छादित पारिदिए । यो देखेर अभिमन्यु बडो क्रोधमा भरिएर मद्रराजको रथतिर हानिए र बडो तीखो बाणले उनलाई बिध्न थाले । अनि दुर्योधन, विकर्ण, दुःशासन, विविंशति, दुर्मर्षण, दुस्सह, चित्रसेन, दुर्मुख, सत्यव्रत र पुरुमित्र–यी सबै योद्धाहरू मद्रराजको रक्षा गर्न थाले तर भीमसेन, धृष्टद्युम्न, द्रौपदीका पाँच पुत्र, अभिमन्यु र नकुल–सहदेवले तिनीहरूलाई रोकिदिए । यी सबै वीर बडो उत्साहका साथ आपस्तमा युद्ध गर्न थाले । यी दुवै पक्षका दश/दश रथीहरूको भयङ्कर युद्ध आरम्भ हुँदा त्यसलाई तपाईं र पाण्डव पक्षका अन्य रथीहरू दर्शकभैंm हेर्न थाले । दुर्योधनले अत्यन्त क्रोधित भई चारवटा तीखो बाणले धृष्टद्युम्नलाई बिधिदिए तथा दुर्मर्षणले बीस, चित्रसेनले पाँच, दुर्मुखले नौ, दुस्सहले सात, विविंशतिले पाँच र दुश्शासनले तीन बाण हानेर उनलाई घाइते पारिदिए । अनि धृष्टद्युम्नले पनि आप्mनो हातको चटक देखाउँदै ति
जीवन ः एक विश्लेषण
– जि.सी. हरि संसारमा गर्नेहरू को हो भनिरहँदा नगर्ने को हुन्छ र ? केही नै नगरी को बाँच्दछ भन्ने प्रश्न उठ्छ । समग्रमा तथ्याङ्कले देखाए अनुसार तीन प्रतिशतभन्दा कम मानिसले यस धर्तीमा केही गरे । यसको मतलब हुन्छ, कुनै एक विद्वान्, वैज्ञानिक, साहित्यकार, दार्शनिक वा कुनै कसैले जुन काम गरे, त्यो आप्mनोलागि मात्र नगरी सिङ्गो विश्वका लागि गरे र वास्तवमा समग्र प्राणीमध्ये सर्वोच्च प्राणीका रूपमा आपूmलाई पुष्टि गरे । जुन कुरा हामी नगर्नेहरूले गरेको प्रयोगबाट स्पष्ट छ । मानव मरणशील छ र त विभिन्न आविष्कार, विकास तथा नौला कामहरू गरिरहेको छ । यदि मानव मरणशील नहुँदो हो त के थाहा केही नगरी पो बस्थ्यो कि ? त्यसैले मान्छेले अन्तमा मर्नै पर्ने भएकोले बाँचुन्जेल केही गरौं भन्ने हेतुले सोको लागि मरिहत्ते गर्छ । अन्तमा सफल पनि भएको छ । तर सबै मानव त्यो श्रेणीमा पुग्न सकेका छैनन् । ती केवल शारीरिक संरचनामा नाम मात्रका मानव हुन् । जसरी अरू लाखौं करोडौं प्राणीहरू यस धर्तीमा जन्मेर मरे, जसको लेखाजोखा छैन, त्यसरी नै ती आए र गए । कसैलाई प्रश्न सोधियो– “तिमी यो काम किन गर्दैछौ ?” उत्तर आउँछ– बाँच्नका लागि
सञ्जय मित्र मेरो नेपाली व्याकरण त्यसै कमजोर भएको होइन । नेपालमा स्वर्ग नै पु¥याउने ठाउँको रूपमा स्वर्गद्वारी भन्ने ठाउँलाई मानिएको छ । स्वर्गद्वारी भन्ने शब्द स्त्रीलिङ्गी हो भन्ने कुरो त्यतिखेर थाहा पाएँ, जतिखेर जनकपुरको गङ्गासागरको एउटा किनारको पल्लोपट्टि स्वर्गद्वार लेखिएको पाएँ । म अचम्ममा परें, स्वर्गद्वार र स्वर्गद्वारी दुवैको अर्थ सम्झेर । धेरैलाई जानकारी नहोला, जनकपुरमा स्वर्गद्वार छ भनेर । जनकपुरको स्वर्गद्वार जनकपुरकै लागि नयाँ हो रे । त्यहीं आसपासका एकजना मित्रले जनकपुर बसाइँको क्रममा कमसेकम एकचोटि हेर्न सकिने ठाउँको रूपमा मलाई टिपाएका थिए– भूतनाथ मन्दिर । भूतनाथ मन्दिर प्रवेश गर्न स्वर्गद्वार भएर जानुपर्ने । स्वगद्वारले भूतनाथको दर्शन गराउने । बडो गज्जबको वा अनौठो लागेको थियो । बिहीवार बिहान ३ बजेर २४ मिनेटमा ढोका ढकढकाउँछ कसैले । जनकपुरको पुरानोमध्ये स्तरीय मानिने होटल वेलकमको कोठा नम्बर ११० मा वास्तवमा मस्त निद्रामा छौं, सञ्जयकुमार मिश्र र म । ढोका एकोहोरो ढकढकिइरहेछ । को हो, किन हो केही बोल्दैन । माथि झुन्डिएर आप्mनै गतिमा घुमिरहेको पङ्खाको आवाजले पनि ढो
भ्रष्टाचारले व्यक्ति मोटाउने मुलुक डुबाउने गर्छ
वैद्यनाथ ठाकुर कुनै पनि देशको विकास एक दिनमा भएको छैन । यो हप्ता, महीना वा वर्षमा पनि हुने कुरो होइन । यसको लागि दशकौं चाहिन्छ । कुनै पनि कुराको विकास भनेको शृङ्खलाबद्धरूपमा हुने गर्छ । जबसम्म संसारमा मानिसहरूको ठोस प्रतिबद्धता हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि ठाउँमा विकास सम्भव हुँदैन । विकास एउटा व्यक्ति वा समुदायको फगत इच्छाले हुने कुरो होइन । विकासको लागि बलियो प्रतिबद्धता अर्थात् इमानदार प्रतिबद्धता चाहिन्छ । राज्य तथा नागरिक दुवै पक्ष विकासप्रति प्रतिबद्ध नभएसम्म कुनै पनि ठाउँको विकास सम्भव छैन । नागरिकले केवल सैद्धान्तिकरूपमा विकासको पक्षपोषण गरेर कतै पनि विकास हुन सक्दैन । विकासको लागि ठोसरूपमा परिवर्तन गर्ने व्यावहारिक प्रयत्न चाहिन्छ । त्यसैगरी, राज्यले पनि केवल सस्तो नाराको रूपमा विकासलाई लिएर हुँदैन । विकासको केवल नाराले भोटको आकर्षण बढाउन सक्छ, नागरिकको ठूलो जमातलाई आपूmतिर तान्न सक्छ तर त्यतिको मात्रै भरले विकास संसारमा कतै पनि सम्भव हुँदैन । राज्यले कतिपय कुरामा कठोर बन्न पनि आवश्यक पूर्वशर्त हुन्छ विकासको लागि । जबसम्म राज्य आपैंm अस्थिर रहन्छ, तबसम्म वास्तवमा विकासले
प्रश्नपत्रले उठाएका प्रश्न
सप्तरी जिल्लाबाट एसइई परीक्षाका प्रश्नपत्र लगातार बाहिरिरहेको छ । बिहीवार हुने विज्ञान विषयको प्रश्नपत्र बुधवार राति सार्वजनिक भयो । शुक्रवार हुने सामाजिक विषयको प्रश्नपत्र बिहीवार राति नै सार्वजनिक भयो । सप्तरी प्रदेश नं. २ मा पर्छ । यसर्थ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रदेश २ का ८ वटै जिल्लाको विज्ञान विषयको परीक्षा रद्द ग¥यो । शुक्रवार सामाजिक विषयको परीक्षा सञ्चालन हुनुअगावै स्थगित भयो । सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको प्रश्नपत्र परीक्षाको दिन बिहानैदेखि सप्तरीका फोटोकपी सेन्टरहरूमा छ्यापछ्याप्ती थियो । घटनाले परीक्षार्थीहरू आन्दोलित बनेका छन् । आन्दोलनले प्रदेशस्तरीय रूप लिएको छ । आन्दोलनमा सहभागी विद्यार्थीहरूमा पनि दुई धार देखिएको छ । एक पक्षको भनाई छ– “जुन जिल्लामा प्रश्नपत्र बाहिरिएको हो, त्यहाँको मात्रै रद्द गर्नुपर्छ । अरू जिल्लाको किन रद्द गरियो ? परीक्षा बोर्डको निर्णय सच्याइनुपर्छ ।” अर्को पक्षको भनाई भने– “अहिले प्रश्नपत्र बाहिरिएका स्थानहरूमा अघिल्ला विषयका प्रश्नपत्रहरू पनि बाहिरिएका होलान् । अग्रीम प्रश्नपत्र फेला पार्नेहरूको ग्रेड उच्च आउन सक्छ । यसर्थ बितेका विषयको